Mahadsanid, Squidoo! (Shoemoney fiirso) | Martech Zone
Mahadsanid, Squidoo! (Shoemoney fiiro gaar ah)
Isniin, February 26, 2007 Khamiista, Oktoobar 29, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaa i argagax geliyay qaar ka mid ah faallooyinka ku faalooda barta 'obvious URL-ka loo socdo runti wuxuu ahaa Squidoo muraayadaha indhaha Haddii uu jiro qof qaaraddaan ku jira oo aan u adkaysan karin Spam, waxay u badan tahay Seth Godin, Author of Suuqgeynta Oggolaanshaha iyo aasaasaha Squidoo.
Ogeysiis ku saabsan Spammers: Squidoo malaha maahan meesha ugu wanaagsan ee laga sameeyo dukaan.
Sikastaba, waxaan si fudud udaadiyey Squidoo qoraal fiican oo aan dib ugu eegay muraayadaha su'aasha ah waxaanan dareemay inuu jiro spammer saaran markabka Maanta (waa Isniinta), waxaan ka helay warqad qoraal ah kooxda ka socota Squidoo in ay eegeen muraayadaha indhaha xubnahooda oo ay iska cadahay in loo diyaariyey sidii wejiga hore ee suuq geyn la shaqeysa oo ay heshay Spam. Waxay curyaamiyeen koontada. Waan xaqiijiyey oo waa baxday.
Toddobaadkii hore, waxaad u badan tahay inaad maqashay "weyn in la sameeyo" ku saabsan Shoemoney oo laga tuuray MyBlogLog ka dib wuxuu soo dhigay Aqoonsiyada Isticmaalaha ee xubnaha kale bartiisa… Cillad ku jirta qaabka gaarka ah ee MBL. Shoemoney ayaa tan iyo markii dib loo soo celiyay ka dib qoraal ka soo baxay MBL oo ku yaal boggooda oo ku saabsan dhacdada iyo dib u dhaca.
Waa tan qaadashadayda. Ma lihi wax ka dhan ah Shoemoney runtiina waxba kama haysto MyBlogLog. MyBlogLog duco ayey ku noqotay boggeyga iyo dadka kale soo-gaadhista ay naga heshay. Si kastaba ha noqotee, waxaan dhihi lahaa tan… Waxaan si daacad ah u aaminsanahay in markii Shoemoney la tuuray, ay sabab u ahayd MBL waxay ka walaacsanayeen arrimaha kale ee qorayaasha 'bloggers' maadaama Shoemoney uu markii hore dhajiyay 3 aqoonsi kadibna uu ku daray qaar kale oo dheeri ah.
Ma aaminsani taas MBL ikhtiyaar u laheyd… intee in leeg ayuu Shoemoney gaari lahaa? Ma wuxuu u baxayay boqol halkaas? Kun? Miyuu ku qori lahaa nooc ka mid ah qoraalka cirbadeynta SQL halkaas oo uu ka soo degsanayo keydka aqoonsiga? MBL Xaqiiqdii ma aysan ogeyn sidaas darteed way gooyeen… si dhakhso ah. Taasi way noo fiicneyd dhamaanteen.
Ma ahayn ciqaab Shoemoney, waxay ku saabsaneyd in nala ilaaliyo. Taasi ma ahan wax fiican? Sow ma ahan waxa aan dooneyno? Hal saac gudahood, iibiye ayaa bilaabay difaac laga yaabo inuu ka hortago weerar amniga ah.
… Dib ugu noqo Squidoo, Shoemoney - fadlan ogow:
Shirkad ayaan u soo sheegay arrin waxaanan siiyay waqti ay kaga soo jawaabaan oo ay uga falceliyaan. Waxaan helay email xaqiijin ah oo igaga mahadceliyay inaan u keenay dareenkooda, way baareen arrinta, waxayna ballanqaadeen inay ku xallin doonaan waqtiga ku habboon. Markii aan guriga imid maanta, waan hubiyey oo isticmaalaha iyo muraayadaha indhaha waa la waayey.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, markaad hesho dalool amni ama arrin la xiriirta badeecad, waxaa kugu leh asxaabtaada isticmaaleyaasha ah inay kugu soo wargeliyaan macluumaadka waqtiga ku habboon oo aad iyaga siiso waqti ay kaga falceliyaan. Hindsight waa 20/20, laakiin waan ixtiraami lahaa Shoemoney wax badan oo intaas ka badan haddaan akhrin lahaa Xajka Suuqgeynta blog in Shoemoney uu la shaqeeyay MyBlogLog si uu u xiro daloolka amniga habeen ka hor.
Shoemoney ayaa soo sheegi lahayd horumarka, sida suurtagalka ah MBL oo labaduba way xusi karayeen in laga bilaabo waqtiga warbixinta ilaa waqtiga sixitaanka ay ka yartahay hal saac. Haddii aysan ka jawaabin, ka dib gebi ahaanba iyaga kari! Laakiin ha dhejin daldaloolada, iyaga kari, oo sug inaad aragto waxa dhaca. Taasi waa ku xun tahay qof walba.
Markii la soo gudbiyo arinta lana sugo jawaabta, waxay abuuri lahayd wax aad u yar oo carqaladeyn ah, waa laga fogaan lahaa qaadacaad, waxaa laga fogaan lahaa faallooyinka gazillion ee boggaga kala duwan, waxayna ka badbaadin laheyd isticmaaleyaashan aqoonsigooda displayed guul qof walba. Waan u mahadcelin lahaa Shoemoney waana mahad celin lahaa MBL. Waxay ku tusin lahayd inay labadooduba adiga iyo adiga ba raadinayeen.
Oh haa… mahad, Gil (ka Squidoo). Mahadsanid, Seth! Waan ku faraxsanahay inaad waqti u bixisay si aad u saxdo arrintan oo aad u fiirsato kuligeen.
PS: Ma doonayo dagaal olol ah oo bilaabmaya. Waan ixtiraamayaa Shoemoney - waa awood weyn oo blogger ah oo leh raaxo aan caadi aheyn. Waa mid karti badan isla markaana guulo badan soo hooyay. Waxaan rajeynayaa inuu yeesho kalabar soo-gaadhistii uu maalin uun la kulmay. Kaliya waxaan rabaa inaan ra'yigeyga banaanka dhigo oo waxaan rajeynayaa inuu dib uga fikiro habka marka wax sidan oo kale ah ay dhacaan mustaqbalka. Shaki kuma jiro inuu arrimo dheeri ah ka heli doono codsiyada kale… Waxaan rajeynayaa inuu gacan ka geysto ilaalinta dhammaanteen!
Maxaa dhacay Maalinta Dhalashadaada?
3-da Qodob ee ugu sareeya ayaa ka maqan Raadinta Blog-ka Google?
Feb 26, 2007 markay ahayd 8:06 PM
Badanaa kama qayb galo olollada… aad u badan oo waqti dhumis ah oo aan macaash badan ka helin taas =)
Waxyaabo badan oo kaa maqnaa taariikhda iyo waxyaabaha daaha gadaashiisa ka dhaca laakiin sheyga mybloglogga wuxuu ahaa usbuucii hore 😉
Feb 26, 2007 markay ahayd 8:10 PM
Waad ku mahadsan tahay booqashadaada! Runtii waan ku qanacsanahay runtiina waad saxantahay - Anigu waxaan ahay dhinac saddexaad oo tan ah sidaa darteed aragtidayda ayaa laga yaabaa inay aad uga soo kabato.
Runtii waan ku qanacsanahay xaqiiqda ah inaadan ka qaybqaadan dagaalada ololka, waan ixtiraamayaa qorayaasha wax qora oo iska ilaaliya isku dhaca (taasna runti maahan ujeedka tan).
Waxaan si fudud u rajeynayaa wada xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya alaabada iyo dadka, ka faa'iideysiga baloogyada iyo khudbadaha cagajuglaynta ah ee ku habboon, dadkana waxaan siinayaa faa'iidada shakiga ah inay wax sax ah sameeyaan.
Waad shiilisay MBL oo aad ufiican in mudo ah halkaas. Waxaan rajeynayaa inay arrimuhu ku soo socdaan.
Mar labaad waad ku mahadsan tahay booqashadaada! Waxaan rajeynayaa inaad soo noqoneyso.
Feb 26, 2007 markay ahayd 11:05 PM
Ninkaas waxaa loo aqoonsan karaa inuu yahay qaladkii ugu weynaa ee nacasnimada ahaa. Waxyaabahaas yar yar ee aynaan ka fikirin mararka qaarkood dib ayey noogu soo noqdaan. Faallo dheeri ah lagama bixin doqonnimada ku lug leh… ..
Feb 27, 2007 markay ahayd 8:23 PM
Dhibic wanaagsan oo aad halkaas ka samaysay!